समानान्तर Samanantar: कुनै बेलाको सम्झना !
कुनै बेलाको सम्झना !
यो कुलो पहाडी खाद्यान्न परियोजनाको सहयोगमा पक्की नबाइएको थियो । अहिले कुलो लाग्ने खेत घरले भरिएछ । कुलो मासेर मोटर बाटो बनाइएछ । विकासका क्रममा यस्तो हुनु स्वभािवकै होला । कुलो निर्माण योजना स्वीकृत गराउन आफूले पनि केही परिश्रम गरेकाले कताकता नरमाइलो लाग्यो ।
बाँकी रहेको कुलोमा पानी चल्दैछ तर कुलो तल पुगेपछि मासिएछ ।
यो पुरानो धारो पनि बेवारिस भएछ । अहिले सबैका घरमा धारा छन् । सार्वजनिक धारा उपेक्षित छन् । आँबु खैरेनी गाविस नजिक घर बनाएपछि हामीले खानेपानी ल्याएका थियौँ । मानकाजी श्रेष्ठ प्रधानपंच थिए । म उपप्रधानपंच । यो धाराले मलाई मानकाजी काका सम्झायो । काका मेरा बाका दौँतरी र मिल्ने साथी । मलाई पुत्रवत् माया गर्थे र नेता पनि मान्थे । काकाले आँबु गाउँको विकासमा धेरै योगदान गरेका थिए तर जीवनको आखिरीितर काकाले यथोचित सम्मान पाएनन् । यो गाउँबेसी गर्ने बाटाको धारो निकै चल्तीको थियो । अहिले अवशेषका रूपमा छ । अहिलेका धेरैलाई उतिबेलाको दुःख थाहा छैन र हुनु जरुरी पनि छैन । तैपनि ...
(यो धाराको सम्झनाले मलाई भावुक बनाउने अर्को कारण पनि छ । मेरी पत्नी गर्भवती थिइन् । उनलाई मैले सुत्केरी नहुँदै धारा बनाउने वाचा गरेको थिएँ । यो प्रसंग भने अहिलेसम्म हामी दुई जनाबाहेक अरूलाई थाहा थिएन ) ।
Posted by govinda adhikari at 10/25/2012 05:34:00 PM
नदुखेको घाउ भो नकोट्याऊ
औषधि पसलमा ठगी
कस्तो विकास ?
जन भोजनको स्वाद
राष्ट्रपति कांग्रेसै हुन् त ?
तमासे हुने बेला हैन